४० कटेसी फेरि महिलाहरुमा किन यौन चाहना तिब्र हुन्छ ? यस्तो छ रहस्य !
From KTM Dainik TV ! Subscribe Us for More Videos
विवाह पछि सम्बन्ध बनाउन पुरुषवादी समाजमा पुरुष नै हाबी भएतापनि एक अध्ययनले महिला पनि विवाहवेत्तर सम्बन्ध राख्न चाहान्छन् भन्ने देखाएको छ । अध्ययनमा उल्लेख भएअनुसार ४० वर्ष कटेका महिलाको ठूलो संख्या बिवाह पछि पनि सम्बन्धमा रहन्छन् ।
एक अध्ययनले देखाए अनुसार ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहनुका विविध कारणहरु छन् ।
Prevयो एउटै सब्जी जसले हृदयघातको जोखिम जरैदेखि समाप्त पार्नेछ, जान्नुस कसरी?
Nextनेपाली झन्डाले हात पुछेको भन्दै नेपाली र भारतीय विद्यार्थीविच कुटाकुट